Spinach, Strawberry ary salady aviavy miaraka amin'ny Honey Vinaigrette | Recipe ao an-dakozia
Maria vazquez | | Salady
Miaiky aho. Ny salady epinara, frezy ary aviavy miaraka amin'i honey vinaigrette dia iray amin'ireo tiako indrindra. Mety hisy fiatraikany fa fohy ny vanim-potoanan'ny frezy ary noho izany ny fotoana hankafizana an'io salady io koa. Mora dia tsara koa ny miomana. Inona koa no azonao angatahina amin'ny salady?
Fangaro telo sy fitafiana tsotra. Ity salady ity dia iray amin'ireo porofo manamarina fa ny fahatsorana dia afaka manome antsika fahafaham-po ihany koa. Ny fanomanana azy dia tena tsotra ary nanjary safidy tsara hafa izy io ho toy ny fampianarana voalohany arahin'ny akoho natsatsika miaraka amin'ny cider na sasany Dipoavatra voaroy.
Izy io koa dia azo aroso ho sakafo hariva maivana miaraka amin'ny salady an'ny sasany fromazy kely sy paoma kely. Toa safidy tsara ho ahy foana io. Mila manandrana fotsiny ianao dia lazao amiko raha mifanaraka amiko na tsia.
Ny epinara, frezy ary salady aviavy miaraka amina fahagagana vinaigrette arivo miaraka amin'ny fahatsorany, ka mahatonga azy ho starter tsara na làlana voalohany.
Epinara 4 eran-tananana
Aviavy 6 maina
Menaka oliva virjiny 3 sotro fihinanana
Tantely 1 sotrokely
Vinaingitra balsama 1 sotro
Diovinay ny epinara, esory ny rambony ary tapatapaho raha lehibe izy ireo.
Apetratsika ao anaty vilia salady ny epinara ary amin'ireto ny frezy sy aviavy nendahina.
avy eo manomana ny vinaigrette izahay. Mba hanaovana izany dia afangaro ao anaty vilia ny diloilo, tantely, vinaingitra ary sira sy dipoavatra iray pinch.
Nokapohinay tamin'ny tsorakazo ary arotsakay ny salady.
Manompo ny salady epinara, frezy ary aviavy miaraka amin'ny vinaigrette tantely vaovao izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: firosoana » vilia » Salady » Spinach, Strawberry ary salady amin'ny Fig miaraka amin'ny Honey Vinaigrette